Cryptocurrencies: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, ... အားလုံး cryptos | Gadget သတင်း
El criptomonedas ကမ္ဘာ နေ့တိုင်းပိုမိုအားကောင်းလာနေသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း cryptocurrencies တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအရေအတွက်မှာလူနည်းစုသာဖြစ်သော်လည်းငွေကြေးစျေးကွက်တွင် cryptocurrencies ၀ င်ရောက်ခြင်းကြောင့်လူအများအပြားသည်ဤတော်လှန်ရေးပြောင်းလဲမှုသို့ ၀ င်ရောက်လာကြသည်။
Bitcoin ဆိုတာဘာလဲ? သင်ကြိုက်လား Bitcoins ကိုဝယ်ကြလော့? သင်သိပါလား ethereum ကဘာလဲ ဒီပလက်ဖောင်းကသင့်ကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုခင်ဗျားသိလား။ Bitcoin ချိတ်ကဘာလဲ? Bitcoin နှင့် Bitcoin Cash တို့၏ကွာခြားချက်များမှာအဘယ်နည်း။ Litecoin ကဘာလဲ၊ Bitcoin နဲ့ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ။ ICO ဆိုတာဘာလဲ။ ငါဘယ်လိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလဲ။ လာမည့်လများသို့မဟုတ်နှစ်များတွင်၎င်းတို့၏တန်ဖိုးကိုအများဆုံးတိုးမြှင့်မည့် cryptocurrencies ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
ဤမေးခွန်းများအားလုံးသည်လူအများမိမိတို့ကိုယ်ကိုနေ့တိုင်းမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများဖြစ်သည်။ Actualidad Gadget မှသင့်ကိုဤကဏ္ new သစ်ကိုတတ်နိုင်သမျှနားလည်ရန်သင်ကူညီသွားမည်။
သင်ထို့နောက် cryptocurrencies လောကီသားတို့သည်အထဲကစတင်လျှင် ဒီဆောင်းပါးတွေကသင့်ကိုများစွာကူညီလိမ့်မယ်.
Comprar Bitcoin: Bitcoin ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ပုံ၊
Buy Ethereum: Ethereum ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လို Ethers ၀ ယ်ရမလဲ။
Litecoin ကိုဝယ်ပါLitecoin ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လို ၀ ယ်ရမလဲ
Hashflare, cloud cryptocurrency သတ္တုတူးဖော်ရေးပလက်ဖောင်း.
ရှာဖွေပါ နောက်ဆုံးပေါ် cryptocurrency သတင်းနှင့်သင်ခန်းစာများ အပြည့်အဝအာမခံချက်နှင့်အတူဤကဏ္investတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်လည်ပတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
por Miguel Gaton လွန်ခဲ့တဲ့2အနှစ် .
cryptocurrencies ၎င်း၏သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံး၎င်း၏ဘဝနှင့်အတူလိုက်ပါကြပြီအားလုံးအတက်အကျပြီးနောက်၎င်း၏ ...
por Gadget သတင်း လွန်ခဲ့တဲ့2အနှစ် .
ပုံပြင်ထဲ၌သင်သည်ပုရွက်ဆိတ်ကဲ့သို့နေထိုင်ရန်အမြဲမလိုအပ်သော်ငြားလည်း cicada အနေဖြင့်သာလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ပညာရှိရာမကျပါ။
Cryptocurrencies သည်ကြာမြင့်စွာကတည်းကပင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်တွင် ... စူးစမ်းလိုစိတ်၏နယ်ပယ်ကိုစွန့်ခွာခဲ့သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Bitcoin အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှစျေးနှုန်းခြယ်လှယ်စုံစမ်းစစ်ဆေး
por Eder Esteban လွန်ခဲ့တဲ့4အနှစ် .
Bitcoin ဦး ဆောင်မှုနှင့်အတူ cryptocurrency စျေးကွက်, အကောင်းဆုံးတစ်နှစ်ရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်း၏တန်ဖိုးကျဆင်းခဲ့သည်
အဆိုပါ cryptocurrency အလုအယက်သေးမပြီးဆုံးပါ။ 2018 သည်ဤစျေးကွက်အတွက်လုံးဝအပြုသဘောမဖြစ် ...
Facebook သည် blockchain အသစ်တစ်ခုကိုပြင်ဆင်နေသည်
ဒီလတွေမှာ Blockchain အတွက်ကုမ္ပဏီဘယ်လောက်အလောင်းအစားတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်နေရပြီ၊ အနာဂတ်ကိုအနာဂတ်ရဲ့နည်းပညာလို့လူအများကမြင်နေကြတယ်။ အရမ်း…
လွန်ခဲ့သောအချိန်က Telegram သည် Gram နှင့်အတူ cryptocurrency ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ဤစီမံကိန်းကိုစတင်ရန် ...
Coinbase သည် WikiLeaks အကောင့်ကိုပိတ်ဆို့ထားသည်
WikiLeaks အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုတ်ယုတ်မှု Coibase ၌သူတို့အကောင့်ကိုပိတ်ထားပြီးကတည်းက ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ...
Plattsburgh သည် Bitcoin Mining ကိုတားဆီးရန်ပထမဆုံးမြို့တော်ဖြစ်လာသည်
အဆိုပါ cryptocurrency အလုအယက်သေးအဆုံးသတ်မလာကြပုံရသည်။ သုံးစွဲသူများစွာသည် Bitcoin ကိုဆက်လက်သတ္တုတွင်းများဆက်လက်သုံးစွဲလျှက်ရှိသောကြောင့် ...
၂၀၁၇ ခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံး Bitcoin, Ether နှင့်အခြားသူများကဲ့သို့ cryptocurrencies သိသိသာသာတက်လာပုံကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါပြီ။